🥇 ▷ Ubisoft ayaa xallin doonta dhibaatooyinka DDoS ee Rainbow Six Siege ✅
Ubisoft ayaa xallin doonta dhibaatooyinka DDoS ee Rainbow Six Siege
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn ee soo gaadhay Rainbow lix Siege bilowga xilli ciyaareedka cusub ee khiyaamada ayaa soo noqday. Xaaladdan oo kale, inkasta oo ay tahay isla dhibaatadii oo ciyaarta xoog badan ku dhex jirtay muddo, iyadoo bilowgii ah Ember Rise, tirada dhibaatooyinku way ku bateen DDoS iyo weerarada DoS. Taasi waa, weerarro loo geysto server-yada Ubisoft ee carqaladeeya howlaha caadiga ah ee ciyaarta.
DDoS waxay weerartay Rainbow Six Siege
Markay tani tan nagu dhacdo intaan ciyaareynay, labo waxyaabo ayaa dhici kara. Ama khiyaamada su’aasha ah ayaa ciyaarta tuura, iyo ciyaarta waxay u egtahay inaysan waligeed jirin, ama iyadoo ay jirto qashin ka mid ah server-ka waxaa la raadinayaa inuu kordhiyo ciribtirka ciyaartoyga xad dhaafka ah, taasoo ka dhigeysa dhaqdhaqaaqa mid aan macquul aheyn oo horseedda guul darrooyinka wareega wareega kooxda weerarka, oo aan qaadi karin SEDAX.
Waxay umuuqataa in dhibaatooyinkaas si dhakhso ah loo xallin doono, ama ugu yaraan Ubisoft ay ka shaqeynayaan. Tan waxaa la socodsiiyay shirkadda, oo ka warqabta dhibaatooyinka hadda haysta is rasaasayntiisa. Waxay aqoonsan yihiin in weerarada DDoS ay si weyn u kordheen tiradooda intii lagu jiray labadii toddobaad ee la soo dhaafay, iyadoo ay timid imaatinka Ember Rise, sidaa darteedna tillaabo loo qaadi doono sidii loo soo afjari lahaa dhibaatadan.
Tan darteed, marka lagu daro dariiqa sharciga ah ee ka dhanka ah websaydhada ama dadka martigaliya howlahan, talaabooyin kale oo ciyaarta ayaa la qaadi doonaa. Waxaad filan kartaa mowjad mamnuuc ah oo cusub, adigoo cadeynaya ciyaartoydii fulisay ficiladan. Tirada cayaaraha ay maamulayaan adeegayaashu sidoo kale waa la yareyn doonaa, iyo ganaaxa ka tagista ayaa si ku meelgaar ah looga ciribtiri doonaa ciyaarta, si looga fogaado in dhibaato hor leh ku dhacdo ciyaartoydan ku dhacay dabinka noocan ah inta ay ku jiraan kulamadooda.